सरोगेट मदर | PBM News.com
घरको कमजोर आर्थिक अवस्था, त्यसमाथि वृद्ध सासूससुराको जिम्मेवारी अनि बिरामीको उपचार खर्च अब कसरी थेग्ने ? बिरामी भएपछि जागिरको पनि के ठेगान भयो र ! आखिर अस्थायी न हो । अब यो सब… केले श्रीमान्को मिर्गौला फेर्ने ? म द्विविधामा परेँ । उपचार नगरौं पनि भरखरकै उमेरमा आँखै अगाडि यो दुर्दशाको कसरी टुलुटुलु हेरेर बस्न सकूँ ? उपचार गरौं, महङ्गो उपचार कसरी थेगौं ? यत्रो खर्च कहाँबाट जुटाउनु ?
मलाई त्यो डाक्टरदेखि रिस उठेर आयो । कति सजिलै… ! कुनै नारी आफ्नो अस्मिता त्यति सजिलै कसैलाई सुम्पन तयार कसरी हुन सक्छे ? कुरा सुनेर ठाडै अस्वीकार गरेँ । हुन त अस्वीकृति मेरो समस्या समाधान थिएन । डाक्टर अलिकति हच्किए पनि । वातावरणलाई सहज बनाउने प्रयास गर्दै उनले भने, “तपाईंको समस्या समाधानका लागि एक उपाय बताएको मात्र…।” मेरो मुखबाट कुनै जवाफ आएन । म त्यहाँबाट बाहिरिएँ । घर कसरी आइपुगेँ पत्तो भएन । सोचेँ श्रीमान्लाई बचाउने उपाय के त ? तत्कालै यतिको ठूलो रकम कसरी जुटाउने ? कुनै उपाय पनि त छैन ।
बिछ्यौनामा पल्टिएँ । अर्को बिछ्यौनामा श्रीमान् सुतिरहेका थिए । एक निरीह प्राणीजस्तै लाचार, युद्ध हारेर पराइको छाउनीमा बन्धक सिपाहीजस्तै देखिरहेथेँ म उसलाई त्यतिबेला । औषधिले र पेनकिलरले कतिञ्जेल धान्न सक्थ्यो र उसलाई… पूरै शरीर सुन्निएकै छ । बिस्तारै उसको अनुहारमा नजर पु¥याएँ । कति मयालु छ अबोधपन डुलिरहेको छ उसको अनुहारमा… केटाकेटीको जस्तै ! हुन पनि मलाई उसको सबैभन्दा मन पर्ने चिज नै उसको स्वाभिमान हो । तर आज उसको त्यही स्वाभिमानले किन उसलाई नै गिज्याइरहेको छ त्यो पनि पराजयको अन्तिम बिन्दुबाट…? अँह म उसको हारको कारक बन्न चाहन्नँ… बरु मृत्यु स्वीकार गर्छु । के यसबाट उसले जित्छ त ! अँह कदापि जित्दैन… बरु बेच एक गर्भ बेचेर जीवन रक्षा हुन्छ भने । खनौंला नयाँ बाटाहरु यदि पदयात्राका लागि सबल बन्छन् भने पथको के फिक्री रह्यो र !
“ए हो… सुनौं न त तपाईंको सर्त । ”
“ए ल… म डा.कोभिडसँग कुरा गरेर तपाईंलाई खबर गरौंला ।” उसको जबाफ थियो ।
ऊ कोठाबाट निस्किएपछि म दुध खाएर कोठामै पल्टिएँ । अनि भोलि त यो घर अनि आफैंले जन्माएको छोरो छोडेर जानु छ । झण्डै एक वर्षको अवधिमा कस्तो भयो होला है हाम्रो घर । अनि श्रीमान्, सासूससुराको अवस्था कस्तो होला ? सम्झन्छु । हुन त उनीहरुसँग पनि कहिलेकाहीँ फेसबुक म्यासेन्जरबाट कुरा भइरहेको हो । फोनबाट गर्न मिलेन । उनीहरुका लागि त म वैदेशिक रोजगारीमा छु । भोलि त भेट भइहाल्छ । अरुभन्दा पनि मलाई १० महिना गर्भमा बोकेर जन्माएको मेरै मुटुको टुक्रालाई कसरी छाडेर जान सक्छु र म ? म भक्कानिन्छु । आमाको ममता नै त हो । आँसुले सिरानी भिजेको छ । तर पनि सत्य कुरा भोलि आफैंले छोरा छोडेर जान बाध्य छु । म अमिलो मन हुँदै गर्दा भोलि छोरा छाडेर जानुपर्ने पीडाले छटपटाउँदै गर्दा राति कति खेर निदाएछु पत्तै भएन । सपना देखेँ आफ्नै श्रीमान् घरमा आफूलाई कुरेर बसिरहेका । भन्दै थिए । तिमी आउँछौ र छोराछोरी जन्माऔंला । बाआमा पनि तिम्रै प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ । आऊ छिटो आऊ । भन्दाभन्दै म झल्याँस्स ब्युझिएछु । भित्ताको घडी हेर्दा बिहानको सात बजिसकेको रहेछ । साभार – ब्राहखरी
भारतमा नेपालीमाथि ज्यादती सुरु, कपाल मुण्डन गरेर नारा लगाउन लगाइयो